Kusoo Dhawoow Bogga QalinkiiMuxammed - Qalinkii Muxammed
"Addoo Dhaxal Reebi Kara Ha Noqon Dhinte Aan La tabin"
Kusoo Dhawoow Bogga QalinkiiMuxammed
Waan ku faraxsanahay inaad soo booqatay boggan, hadaan wax yar kaaga sheego halkan waxaad ka heli karto waxaa kamid ah, buugaygii ugu danbeeyay ee aan qoro magaciisuna yahay Waa Imtixaan Nolosha Adduunyo, buuggan sidaad ku arki doonto bogga aan wax kaga qoray, wuxuu ku saabsan yahay guud ahaan murugada iyo dhibaatooyinka keena iyo sidaad iskaga dawayn kari lahayd Illaahaybaa wax daweeye.
Boggan kaliya ugu maan talo galin inaan kusoo bandhigo Buugaagta aan qoro ee laakiin waxaan ugu talo galay inaan kusoo gudbiyo waxkasta oo aan is idhi way anfacaysaa walaalahaaga Muslimiinta ah ee ku hadla luuqada af-soomaaliga.
Sidaan kor kuso xusay waxyaabaha ugu wanaagsan ee dad looga tago waxa kamid ah dhaxal fiican sidaa darteed ayaan halkan ugu soo gudbin doonaa waxkastoon awoodo, waxaanan rajaynayaa inaad wax uun ka faa’ido intaad dhex mushaaxayso boggaygan.
Waxaad ka heli kartaa boggan oon kusoo gudbin doonaa Qoraalo Xiiso badan, sheekooyin gaagaaban, Odhaahyo iyo cilmi. Hadaad tahay qof nafta ugu raaxeeya wax akhriska boggan wax badan oo aad naftaada ugu raaxayso waad ka heli doontaa Hadii illaahay yidhaahdo.
Hadaad wax qaldan ku aragto qoraaladayda iyo fadlan nala soo socodsii, noo soo dir warqad ama faallo (comment) noogu reeb halka hoose.